किन सिटी ल्यान्ड नदी प्ले खेल - मजा र ज्ञानको रूपमा खेल सिकाउनुहोस्
छोराछोरी किन धेरै खेल्नुपर्छ?
सिटी देश नदी र अधिक बोर्ड खेल
खेलहरू र खेलहरूको बारेमा थप पृष्ठहरू
जब आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीसँग खेल्छन्, उनीहरू निकै कम रूपमा प्रश्नको सामना गरिरहेका हुन्छन् किन खेल खेल्छन् किनकि छोराछोरीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो आंशिक छ किनभने तिनीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई खुसी र आंशिक बनाउन चाहन्छन् किनभने यो "सामान्य" हो।
प्ले - न केवल अवकाश गतिविधि र मजा, तर पनि सिक्न
यद्यपि, खिलौने र खेलहरू एकदम बढि सार्थक प्रकार्य पूरा गर्दछ, जस्तै साना कर्मचारीहरू र रोजगारीको मनोरञ्जन। केटाकेटीहरू खेल्छन्। बजाउने बालबालिकालाई उनीहरूको वातावरणसँग परिचित गर्न, यसलाई बुझ्न र यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रभाव पार्न प्राकृतिक उपाय हो।
खिलौनेको साथ खेल्दै, पुस्तक पढ्दै, संगीत बजाउँदै वा शिल्प बनाउने, प्रत्येक खेलले आफ्नै तरिकामा बच्चाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पूरा गर्छ। हाम्रो आमाबाबु पोर्टलमा तपाईंले यस विषयको बारेमा धेरै सुझावहरू र जानकारी पाउनुहुनेछ।
बच्चाहरु लाई एक पुर्खा जिज्ञासा छ र प्रयोग गर्न उत्सुक छ। तिनीहरू सबै प्रकारका अन्वेषकहरू र अन्वेषकहरू छन्।
यदि एक खेल गर्दा बच्चालाई हेर्छ, एक चाँडै पत्ता लगाउने छ कि उच्च एकाग्रता र उत्साह यसले आफैले आफ्नो कार्यमा समर्पित गर्न सक्छ। चाहे कुनै ब्लक संग केहि बनाइन्छ, वा कागज को टुकडे मा रंगीन हलकों र रेखाहरु।
बच्चाहरु प्राय: उनको खेलमा स्वतन्त्र रूपमा प्रकट गर्न र तिनीहरूको असीमित कल्पना पछ्याउन चाहन्छन्। खेलको बहुमुखीतामा कुनै सीमा छैन। कुन कुराले बच्चाहरु खेल्न सक्दैन, प्रत्येक खेलले उनीहरूको विकासको भाग बढाउँछ। रचनात्मकता संग शुरू, नयाँ ज्ञान को स्वतन्त्र अधिग्रहण को भाषा मार्फत।
यद्यपि बालबालिकाहरूलाई सुझाव, ढाँचा र नियमहरू चाहिन्छ, तिनीहरू खेलमा प्राप्त र प्राप्त गर्ने क्रममा साँचो मालिकहरू छन्, जुन विशेष गरी तिनीहरूको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। खेलमा, बच्चाहरू उनीहरूको संसार जान्छन्, उनीहरूको आफ्नै अर्थमा पत्ता लगाउँछन् कि चीजहरू छन्, तिनीहरूले के चाहिन्छ र तिनीहरूले कसरी काम गर्छन्।
उनीहरूले प्रकृतिको विभिन्न ज्ञानको आकार र आकारको तीव्रतालाई तीव्र बनाउँछन् र उनीहरूको मोटर कुशलता बढाउँछन्। यो मामला हो, उदाहरणका लागि, गुडियाको साथ खेल गर्दा, ईंटहरू निर्माण गर्दा जनावरहरू र मनपराउथे। बच्चाहरू महसुस गर्न मन पराउँछन्, महसुस गर्नुहोस् र उनीहरूलाई मनपर्ने चीजहरू स्वाद गर्नुहोस्। बालबालिकाहरू हेर्न र व्याख्या गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरू अनुभव, पहिचान, प्रयास र आफैलाई बुझ्न चाहन्छन्।
साथै, आफैलाई र अरूलाई जिम्मेवारी र खेलमा आन्तरिक बनाइएको छ। बच्चाहरूले उनीहरूको मनपर्दो भित्तामा जान्छन्, वा उनीहरूको मनपर्ने गुडिया हर ठाउँमा, यसले बच्चाको पहिले नै जिम्मेवारीको विशाल भावना देखाउँछ।
तिनीहरूका भित्री जनावर र गुड़िया मात्र एक विशेष लोकप्रिय खिलौने होइन, तर पूर्ण परिवारका सदस्यहरूले उनीहरूको समर्पण र प्रेमको हेरविचार गर्छन्, र प्रायः धेरै राम्ररी। तिनीहरू यसलाई आफ्नो प्रियजनहरूमा पारित गर्छन्, तिनीहरू आफै तिनीहरूका आमाबाबुबाट जान्छन् र पछि एकताबद्धताका लागि महत्त्वपूर्ण आधारहरू राख्छन्।
तथापि, जब पार्लर खेलहरू जस्तै शहर-ल्यान्ड-नदी खेल्दै, बच्चाहरूले आत्मविश्वास र आत्म-पुष्टिकरण जस्ता आधारभूत क्षमताहरू र क्षमताहरू पनि विकास र सुदृढ बनाउँछन्। रचनात्मकता र दिमाग उत्तेजित र उत्साहित छन्, साथै हामी भावना र एक समूह भित्र एक विवादको संकल्प।
तिनीहरू नियमहरूको अवलोकनको बारेमा केहि सिक्न र एकै समयमा पनि एक विफलता र निराशा सहन। दृढता र सहनशीलतालाई बढावा दिइयो र उनीहरूले नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्छन् र सिक्ने स्वतन्त्रता कसरी योगदान गर्न सिक्छन्। यसबाहेक, यो खेल धेरै फरक प्रकारमा खेल्न सकिन्छ र अचानक हालको विकास चरण र बच्चाहरूको चासोहरू अनुकूलन गर्दछ।
त्यसैले बच्चाहरू बिरुवाहरू, व्यवसायहरू, देशहरू, जनावरहरू आदि जस्ता सजिलै सिक्छन्। सुझावहरू र AZ बाट समाधानहरू यहाँ हाम्रो पृष्ठहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। उनीहरूलाई समय र स्थान दिने भन्दा बच्चाहरूको लागि कुनै राम्रो समर्थन छैन किनभने खेल र सिकाउने एक र उनीहरूको लागि एकै कुरा हो।
खेलहरू र खेलहरू
आउटडोर पूलमा जानुहोस्
खेल्न पनि सिक्न अर्थ
खेल टावर्स र चढाई टावर्स
अन्य बच्चाहरु र आमाबाबुसँग खेल्दै
खेल किन केटाकेटीहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ?
कार सवारीहरूको लागि विचारहरू प्ले गर्नुहोस्
बच्चाहरूको लागि व्यायाम गर्नुहोस्
बच्चाहरूको लागि ब्यालेट
शुरुवातका लागि जग लगाउने
बच्चाहरूको लागि मार्शल आर्ट
महिलाहरूको लागि तालिम प्रशिक्षण
हामीले किन एडभेन्टिभ फागुन छ - बाल प्रश्न छ
किन चिनियाँ व्यक्तिहरूले केकोस्टाको साथ खान्छ - किन्डेफ्रेज
अहिले यो तेरह किन छ? बच्चाहरु प्रश्न